Dragon Ball Tap Battle | Avy amin'ny Linux
Dragon Ball: Tap Battle ho an'ny Android ihany
Lalao Dragon Ball Tap Battle aterineto no lalao ady voalohany izay hitondra an'i Z Warriors eo amin'ny efijery kely anao finday avo lenta o takelaka. Tamin'ny famoahana voalohany ny tsena Japoney, nahatratra ny fivarotana ireo lalao App Store sy Play Store efa tamin'ny 25 jona. Ny fanambarana dia natao tamin'ny alàlan'ny tranonkala mafana nomanin'i Namco - mpamokatra ny lalao.
Araka ny tondroin'ny anarana, ny lalao dia hanana ny efijery rehetra mikasika ny fitaovana sy ny baiko izay efa notsorina ho an'ny lalao. Ao amin'ny sary misy azy ireo no ahitanao fa, na eo aza ny fahatsoran'ny fanambaràna amin'ny mpanara-maso, dia mbola manana fanaraha-maso sy bokotra fitodihana ho an'ireo mpanafika mahazatra izy ireo, toy ny amin'ny lalao video. Zava-dehibe iray hafa koa ny fanohanan'ny lalao ny lalao amin'ireo namana eo an-toerana amin'ny alàlan'ny teknolojia Bluetooth.
Lalao Dragon Ball Tap Battle aterineto hanana kinova ho an'ny Smartphone sy tablette Android 2.3 na taty aoriana ary iPhone 4, iPhone 4S ary iPhone 5, miaraka amin'ny fahafaha-mihazakazaka na dia eo amin'ilay taranaka iPod Touch aza. Eo amin'ny tsena Japoney aloha ny lalao ary manodidina ny fito dolara ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Dragon Ball: Tap Battle ho an'ny Android ihany
Miverina amin'ny linux ... miaraka amin'ny Funtoo!
Tmux: manomboka amin'ny multiplexer terminal (Fizarana voalohany)